ဥရောပသား တစ်ယောက်လို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ​ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးများ | Asia News Bar
ဥရောပသား တစ်ယောက်လို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ ​ပြောဆိုနိုင်ကြတဲ့ ကိုရီးယားမင်းသားမင်းသမီးများ
1. Moon Ga Young (ဂျာမန်)
Moon Ga Young ရဲ့ ပထမဘာသာစကားက​ အမှန်တကယ်​တော့ ဂျာမန်ဘာသာစကားဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Karlsruhe မြို့ Germany နိုင်ငံမှာ ​မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး သူမရဲ့ ဘဝသက်တမ်းတစ်ဝက်​လောက်ကို အဲ့မှာ ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးမှ မိသားစုနဲ့အတူ ကိုရီးယားကို ​ပြောင်း​ရွှေ့လာခဲ့တာပါ။
2. Shin Se Kyung (အင်္ဂလိပ်)
သင်သာ “Run On” ဇာတ်လမ်းတွဲကို ကြည့်ဖူးမယ်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Shin Se Kyung က Im Si Wan ရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြန်လုပ်​ပေးတဲ့ ဇာတ်ရုပ်ကို ဘယ်​လောက်ထိ ကျွမ်းကျင်စွာ သရုပ်​ဆောင်နိုင်ခဲ့လည်းဆိုတာကို သိပါလိမ့်မယ်။ သူမဟာ စကား​ပြောတင်မကပဲ အင်္ဂလိပ်စာ အ​ရေးအသားလည်း ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပါတယ်။
3. Seo Ye Ji (စပိန်)
Seo Ye Ji ရဲ့ deep ဖြစ်ပြီး ရှတတအသံက ပွင့်လင်းပြီး တဇွတ်ထိုးလုပ်တတ်တဲ့ Ko Mun Young ဇာတ်ရုပ်နဲ့ ဘယ်​လောက်လိုက်ဖက်လဲဆိုတာကို ​တွေ့မြင်ခဲ့ကြရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ အသံက စပိန်ဘာသာစကားနဲ့​ရော ဘယ်​လောက်ထိ လိုက်ဖက်မလဲဆိုတာကို ​တွေးကြည့်ဖူးပါသလား။ သူမဟာ စပိန်နိုင်ငံမှာ စာနယ်ဇင်းပညာကို သင်ယူခဲ့ဖူးတဲ့အတွက် စပိန်ဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်စွာ​ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
4. Kim Go Eun (တရုတ်)
Kim Go Eun က​တော့ “7th Asian Film Awards” ပွဲမှာ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ် ​ဆောင်ရွက်တုန်းက တရုတ်စကားကို တရုတ်လူမျိုးကဲ့သို့ ကျွမ်းကျင်စွာ ​ပြောဆိုခဲ့ပြီး ပရိသတ်​တွေကို အံ့အားသင့်​စေခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးမဖြစ်ခင်က တရုတ်နိုင်ငံ ​ပေကျင်းမြို့မှာ ၁၀ နှစ်ခန့် ​နေထိုင်ခဲ့ဖူးတာ​ကြောင့် ဒီ​လောက်ထိ ကျွမ်းကျင်​နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
5. Park Bo Gum (အင်္ဂလိပ်)
Park Bo Gum တစ်​ယောက် “Record of Youth” ဇာတ်လမ်းထဲမှာ နိုင်ငံခြားဒါရိုက်တာနဲ့ ​တွေ့ဆုံတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ​ပြောဆိုတဲ့အခါ ပရိသတ်​တွေ ရင်ခုန်ခဲ့ရပါတယ်။ သူဟာ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပဲ ​မွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့​ပေမဲ့ နိုင်ငံတကာက ပရိသတ်​တွေနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အင်္ဂလိပ်စကားကို သင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
6. Gong Yoo (အင်္ဂလိပ်)
အင်တာဗျူး​တော်​တော်များများမှာ Gong Yoo ဟာ အင်္ဂလိပ်စကားကို အဖြတ်အ​တောက် အသံထွက်မှန်မှန်နဲ့ ​ပြောဆိုနိုင်တာကို ​တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အင်္ဂလိပ်စကားကို ကိုယ်တိုင်​လေ့လာသင်ကြားခဲ့တယ်လို့ ဝန်ခံထားပါတယ်။
7. Choi Woo Shik (အင်္ဂလိပ်)
“Parasite” မင်းသား Choi Woo Shik က​တော့ ​ကျောင်းသားဘဝတုန်းက မိသားစုလိုက် က​နေဒါနိုင်ငံကို ​​ပြောင်း​ရွှေ့သွားတဲ့အတွက် အင်္ဂလိပ်စကားကို အထူးကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ သူ အသက် ၂၁ နှစ်​ရောက်မှသာ သရုပ်​ဆောင်အလုပ်ကို စိန်​ခေါ်ကြည့်ဖို့ ကိုရီးယားကို ပြန်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခု​တော့ ကိုရီးယားစကား​ပြောရတာ ပိုပြီး သက်​တောင့်သက်သာရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
8. Park Min Young (အင်္ဂလိပ်)
Park Min Young က​တော့ အင်တာဗျူးတစ်ချို့ကို အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ​ဖြေဆိုဖူးပါတယ်။ တကယ်​တော့ သူမဟာ အထက်တန်း​ကျောင်းသူဘဝတုန်းက အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ​လေ့လာခဲ့ပြီး အ​မေရိကန်နိုင်ငံကို exchange student အ​နေနဲ့ သွား​ရောက်ဖူးပါတယ်။ သူမရဲ့ အင်္ဂလိပ်အမည်က​တော့ Rachel ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Preview.ph
Next အထီးကျန်လို့ တစ်ယောက်တည်းသောက်နေခဲ့တဲ့ဂျီဟို,ကို ဂျုံးကုကြီးရဲ့ အကြံပြုစကား »
Previous « V ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ညှို့ဓာတ်ကို သဘောကျနှစ်ခြိုက်နေတဲ့ ထိုင်းကြယ်ပွင့် (၁၁) ဦး
မင်းသားကဲ့သို့ချောလွန်းသည့်အတွက် မိန်းကလေးများကြားတွင်ရေပန်းစားနေသော တောင်ကိုရီးယား ဘောလုံးသမားလေး Jeong Seungwon
ကျောင်းသားကားလေးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပရိသတ်တွေလက်လွှတ်မခံသင့်တဲ့ High School Drama များ
Yoo Jae Suk ကို အသည်းအသန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ မိန်းက​လေး Idol ရှိခဲ့ဖူးတယ်လို့ ​ပြောပြခဲ့တဲ့ HaHa
ကိုရီးယားပြည်သူတွေ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ မိတ်ကပ်မပါလဲလှတဲ့ K Cele အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး